Xeer Ilaaliyaha Guud ee Somaliland Oo Ka Warbixiyay Shir uu Jabuuti kaga qayb-galay oo Maamul-goboleedyada Soomaaliya goob-joog ka ahaayeen - SomalilandPost
Home News Xeer Ilaaliyaha Guud ee Somaliland Oo Ka Warbixiyay Shir uu Jabuuti...
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Somaliland Oo Ka Warbixiyay Shir uu Jabuuti kaga qayb-galay oo Maamul-goboleedyada Soomaaliya goob-joog ka ahaayeen
Hargeysa (SLpost)- Xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Axmed Xasan Aadan, ayaa ka xog-waramay shir uu dhawaan kaga qayb galay dalka jamhuuriyadda Jabuuti, shirkaasi oo lagaga hadlayay arrimaha Budhcad-badeedda iyo sidii looga hor tegi lahaa iyo sidoo kale dembiyadda ka dhaca Badaha.
Shirkan oo ay wada-jir u qaban-qaabiyeen Wasaaradda Cadaaladda Jabuuti iyo haya’dda Midowga Yurub u qaabilsan la-dagaalanka Budhcad-badeedda EUCAP Nestor oo 15-kii ilaa 16-kii bisha socday magaalada Jabuuti, waxa sidoo kale ka qayb-galay Xeer-ilaaliyaal ka socday Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul-goboleedyada Puntland iyo Galmudug, sida lagu sheegay war-saxaafadeed shalay laga soo saaray gunaanadkii shirkaas.
Axmed Xasan Aadan, oo maanta warbaahinta dawladda ugu waramayay magaaladda Hargaysa, waxa uu sheegay in Somaliland ay ku tagtay shirkaasi marti qaad rasmi ah oo ay ka heshay dawladihii soo qaban qaabiyay, waxaanu tilmaamay in shirkaasi lagu soo qaaday kiisas kala duwan oo dhinaca budhcad-badeedda ah oo ka dhacay meelo ay badda Soomaaliya ka mid tahay.
Waxaanu sheegay Axmed Xasan, in Somaliland si weyn loogu amaanay ka hortegista weeraradda Budhcad-badeedda iyadoo shirkaasina lagu soo bandhigay Filim ka hadlayay kiisaskii budhcadbadeedda eek a dhacay calamka kuwa ugu muhiimsanaa iyo kuwo ka dhacay biyaha Soomaaliya.
Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, oo arrimahaasi ka waramayayna waxa uu yidhi “Shirkaasi waxaanu ka faa’iidnay oo falanqayn lagu sameeyay kiisas waa weyn, ama heer caalami ah, sida kuwo ka dhacay Baddaaha. Markaa si loo soo arko wixii dhacay, kadibna go’aan looga gaadho iyo maxkamad ayaa laga dhiganayey tusaale. Sida dad laga dhigayay budhcad-badeed oo la qabanayo. markhaatiyaal ayaa laga dhigay nimankii Jarmalka ahaa ee markabka korkiisa saarnaa, markaa kiisaska la qaatay ayaanu cid walba kaga horumarnay, oo waxa uu noqday kiis Somaliland lagu metalayo.
Waxaanu intaasi ku daray “Kiisaskaasina waxaa laga dhigay kiiska keliya ee lagu qaadan karo tusaale ee ladabikhi karo. markaa maxkamadaheena oo kale inamada na raacay waxay ahaayeen inamo xeer ilaalinta oo waliba waxay ahaayeen nimankii jaamacadaha intay ka soo baxeen tababarka fiican soo qaatay. runtii amaan aad u balaadhan ayaa loo soo jeediyey, oo midba meel ka qayb galay, mid dhanaca difaaca looyariskooda ah, midna dhinaca dacwad oogista, anniga iyo raggii kale waxaanu iska dhigaynay markaa gar-sooreyaal. Markaa xeerka la dabakhayey waa xeerka Somaliland” ayuu yidhi Axmed Xasan.
Xasan Axmed Aadan, isaga oo hadalkiisa sii watay ayaa ka warbixiyey faa’iidadda Somaliland shirkani ugu jirtay kaasi oo ahaa mid heer caalami ah, iyadoo tusaale loo soo qaatay sharciyada dhinaca badaha ee ay Somaliland diyaarisay iyo sida ay diyaarka ugu tahay inay waajahdo budhcad-badeedda.
“Waxaanu nahay dawlad dhisan oo dastuurkeeda shaqaynaya , in xafiiskeena xeeer ilaalinta uu shaqaynayo oo ka lagu casuumay uu ahaa isaga, markaa system-ka oo dhan wuu noo dhisan yahay, in dawlad gaara oo qarana oo dhamays tiran baynu nahay oo fikrad bay dadkii kala tagayaan”.
HSida lagu sheegay Warsaxaafadeed ay shalay soo saa